पहिलो प’टक यौ’नस’म्पर्क गर्ने उ’चित उमेर कुन ? – Jagaran Nepal
पहिलो प’टक यौ’नस’म्पर्क गर्ने उ’चित उमेर कुन ?
बीबीसी- नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौ’नस’म्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन। ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनमा धेरै युवाहरूले कलिलो उमेरमा यौ’नस’म्पर्क राखेर आफ्नो कौ’मार्य गुमाउनु सबैभन्दा ठूलो ग’ल्ती भएको बताएका छन्।